Security personnel in Ethiopia arrested ONN journalists – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSecurity personnel in Ethiopia arrested ONN journalists
Security personnel in Ethiopia arrested ONN journalists
Labsiin Qeerroo Marsaa 4ffaa har’a eegale milkii guddaa agarsiisee oole. Daandiileen gurguddoon tarkaanfii labsii kanaan qullatanii oolaniiru. Konkolaataalee labsii kana dhiitanii sosso’uu yaalan irratti Qeerroon Oromiyaa bakkoota adda addaatti tarkaanfii sirreessii irratti fudhatee jira. Kana irraa ka’uunis konkolaataaleen gurguddaan kan biyya qaxxaamuran of qabanii dhaabatanii ooluuf dirqamanii jiru. Finfinneen yeroo kamuu caalaa gaaddisa labsii kana jalatti liqimfamuun qorritee oolte. Omishoonni qonnaa gabaa Finfinnee seenuurraa waan haphataniif qaala’iinsi jireenyaa kan duraarra har’as dabalee ooleera.
Gama biraan Qarree fi hawwan Oromoo wareegama hadhaahaa isaan gaafatullee, hiriira nagaa jalqaban itti fufuun kutaalee Oromiyaa hundatti babal’isaa jiru. Humna mootummaa Nafxanyaa hidhate dura sodaa tokko malee dhaabbachuun mirga abbaa biyyummaa isaaniif falmachaa oolan. Hogganoota siyaasaa Oromoo hidhaatti qabanii Oromiyaa keessa fandalaluun akka hin danda’amne ummanni keenya karaa hundaan diinatti himaa jira. Tuffiin diinni Oromoof qabu hanga itti fufetti qabsoon kana caalaa finiinee ulfina Oromoo deebisiisuun kan itti fufu taha.
Qeerroon qabsoo guyyaa 2ffaa boruutiif of qopheessaa bulaa. Dirqamni keessan guddaan daandiilee gurguddaa cufuu dha waan taheef halkan kanatti raaw’adhaa. Magaaalaa irraa bahaa cufaa. Yeroo bari’e ammoo konkolaataa labsii kana dhiittee darbuu barbaaddu adabuu irratti of qopheessaa. Oromiyaa keessatti mootummaan Oromoo isini malee Nafxanyaa masaraa sana miti. Mootummaa keessan diinni dhufee isini harkatti qabuu hin qabu. Biyya keessan toyadhaa. Injifannootti dhihoo jirra. Fullaasuutti dhihaanneerra, itti muddaa!
# Injifannoo 5+2=7
Basaastichi # WandimmuuGaaddisaa jedhamu kan
wallagga lixaarra gara jimmaatti jijjirratte sa’a kana
Magaalaa jimmaa naannoo markaattotti haleelameera.Ij
a Abbaa Torbee jalaa nan miliqa jechuun
abjuudha.Warri jimmaa of eeggachaa socho’aa.
# Diina horfee
Abbaan torbee hin qabamus
Abbaan torbee hin dhabamus
Dr. Berhanu Nega has already run away from the Ethiopia. He is in USA
Are the professor #ezema or #prosperity?
<< the justice system is getting better and now it’s in good condition >>
(Professor Birhanu Nega’s speech in America) on September 5, 2020 on his arriaval in USA. By the way the rest of former Derg advisers who are now surrounding Abiy Ahmed have also returned to their respective countries including Dawit W. Giorgis, Kassa Kebede, etc.
Two journalists and a driver arrested, held without charge in Ethiopia Nairobi, March 18, 2020…
Former NTV Journalist Yassin Juma Arrested in Ethiopia By JOHN MBATI on 4 July 2020 (The Kenyans) --…